Alahady Pantekôty – 08/06/2014 – Tenin’Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Vakiteny voalohany: Boky mitantara ny Asan’ny Apôstôly (Asa 2, 1 -11 )
Nony tonga ny andro Pantekôty, dia tafavory tao amin’ny trano anankiray ny Apôstôly rehetra, ary tampoka, injay nisy feo avy any an-danitra toy ny rivotra mifofofofo mafy ka nahenika ny trano nitoerany, sady nisy lela maro mitarehinà afo niseho taminy sy nizarazara nipetraka teny amboniny tsirairay avy, ka samy feno ny Fanahy Masina izy rehetra, sy niteny tamin’ny fiteny maro samihafa, araka ny nampitenenan’ny Fanahy Masina azy avy.
Ary nisy Jody mpivavaka tsara nitoetra tao Jerosalema, avy tamin’ny firenena rehetra ambanin’ny lanitra. Nony nahare izany izy ireo, dia nidodododo maro be ka very hevitra izay tsy izy, fa samy nandre azy ireo niteny ny fiteniny avy izy rehetra. Gaga sy talanjona izy ireo ka vaky nanao hoe: “Endre! tsy avy any Galilea daholo va ireo miteny ireo? Ka ahoana àry ity isika no samy mandre azy miteny ny fitenin-drazantsika avy; dia ny Parta, ny Meda, ny Elamita, sy ny mponina any Mezôpôtamia, Jodea, Kapadôsa, Pônto, Azia, Frijia, Panfilia, Ejipta, ary ny any Libia akaikin’i Sirena, sy ny vahiny avy any Rôma, na Jody na prôzelita, ary ny any Kreta sy ny Arabo, dia ahoana no samy mandre azy ireo milaza amin’ny fitenintsika avy ny zava-mahagaga ataon’Andriamanitra isika rehetra?”
Taratasy voalohan’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Kôrinty (1Kôr. 12, 3b- 7. 12- 13)
Ry kristianina havana, tsy misy afa-milaza hoe: “ i Jesoa no Tompo, raha tsy amin’ny Fanahy Masina. Maro samihafa ny fanomezana, nefa iray ihany ny Fanahy; maro samihafa ny fanompoana, nefa ny Tompo iray ihany; ary maro samihafa ny asa, nefa iray ihany Andriamanitra, izay manao ny zavatra rehetra amin’ny olona rehetra. Samy omena ny fanomezana maneho ny Fanahy izy tsirairay avy, mba hahasoa ny be sy ny maro.
Fa toy ny maha-iray ny vatana, na dia maro rantsana aza, sy toy ny maha-vatana iray ny rantsam-batana, na dia maro aza izy, dia toy izany koa i Kristy. Fa Fanahy iray ihany no nanaovana Batemy antsika rehetra, mba ho vatana iray ihany isika, na Jody na Jentily, na mpanompo na tsy mpanompo; ary Fanahy iray ihany no nampisotroana antsika rehetra.
Evanjely masina nosoratan’i Md Joany (Jo 20, 19- 23)
Ny harivan’ ny Paka, ilay andro voalohan’ny herinandro, raha nirindrina ny varavaran’ny trano nivorian’ny mpianatra noho ny fahatahorany ny Jody, dia tonga i Jesoa ka nitsangana teo afovoany, sy nilaza tamin’izy ireo hoe: “Homba anareo anie ny fiadanana!” Nony efa nilaza izany Izy, dia nasehony azy ireo ny tanany sy ny tratrany, ka faly ny mpianatra fa nahita ny Tompo. Dia hoy indray Izy tamin’izy ireo: “Homba anareo anie ny fiadanana!” Tahaka ny nanirahan’ny Raiko Ahy no anirahako anareo koa. Rehefa nilaza izany Izy, dia nitsoka ka nanao tamin’izy ireo hoe: “Raiso ny Fanahy Masina: ny fahotana izay havelanareo dia ho voavela, ary izay hotananareo dia ho voatana”.